Condom ဆိုတာဘာလဲ? – BurmeseHearts
Last updated Jun 25, 2020
Condom ဆိုတာ ရာဘာစွပ်ကို ခေါ်တာပါ။ အမျိုးသမီးသုံး ရာဘာစွပ် နဲ့ အမျိုးသားသုံး ရာဘာစွပ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အမျိုးသားသုံး ရာဘာစွပ်ကို အသုံးများပြီး အမျိုးသမီးသုံး ရာဘာစွပ်ကို အသုံးနည်းကြပါတယ်။ အမျိုးသားသုံး ရာဘာစွပ်သည် ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ စိတ်ချရကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသမီးသုံး ရာဘာများမှာ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ စိတ်ချရကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် သန္ဓေတားနည်းတွေဟာ ဘာလဲ?
Condom အသုံးပြုနည်းကို ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်မလဲ?
စိတ်ချရတဲ့ရက်တွေကို တွက်ချက်လို့မရသူများ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
စိတ်ချရသောရက်တွေကို ရွေးပြီးအတူနေလျက် ဘာကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရတတ်သလဲ?
BurmeseHearts	 Sep 13, 2015 0
မိခင်လောင်းများ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်
ငဲ့ညှာပါ … မောင်
မိခင်နို့ဟာ ကလေးငယ်ကို ဘာကြောင့် လုံခြုံငြိမ်းချမ်းမှု ခံစားစေပါသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများရဲ့ ရင်သားတွေ အထိမခံနိုင်အောင် နာကျင်နေရင်…
တရားကိုသိမြင်၍ ဘုရားနှင့်သံဃာဂုဏ်ကိုပါ သေချာသိမြင်လာခြင်း
ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ…
COVID-19 မှ ပေးသောတရား
နို့တိုက်မိခင်သောက်သုံးတဲ့ ဆေးဝါးအာနိသင်တွေဟာ နို့စို့ကလေးကို…